Qoraalkan waxaa asal ahaan daabacay Xarun loogu talagalay haybadda wanaagsan iyo halkan ku habboon fasax.
"Colaadu waa umulisada miyirka." - Paulo Freire
Intaan noolahay, weligay ma aanan dareemin rajo badan. Cacophony waxyaabo aan macquul ahayn oo diiradda saarey qarankeena ballaaran (iyo adduunka intiisa badan) dilkii naxdinta lahaa ee George Floyd ayaa daaray wacyiga jiilkeenna. Waxaa naloogu qasbay inaan baarno nafta qarankeena isku dhacsan, waxayna naga dalbatay inaan doorano tallaabadayada xigta annagoo Mareykan ah. Wax badan oo lamid ah wixii dhacay bishii Meey ee sanadkii 1963, iyadoo White America ay daawatay iyadoo aan la rumaysan karin sida dab-bakhtiiyeyaasha iyo eeyaha booliiska loo adeegsaday hub ka dhan ah mudaharaadayaasha nabada ee Alabama, bishii May ee la soo dhaafay, inta badan dadka Mareykanka ee ku abtirsada oo dhan waxay si deg deg ah uga jawaabeen waa inaan isbedel ku sameyno kan weyn wanaagsan.
Kadibna, sida xaalku yahay hadda, marwalba waxaa jira nooc mucaarad ah; xoogag la arkay iyo kuwo aan la arkin oo ka shaqeynaya dib u celinta qarankeena, na kala qeybiya, iyo tamarta iyo kheyraadka si qaldan loo marsiiyo. Sawaxan, si kastaba ha noqotee, kama hor istaagin u-doodayaasha iyo xulafada inay gudbiyaan xuquuqda madaniga ah, codeynta, iyo sharciga guryaha. Inbadan oo naga mid ah ayaa baranay xilligan, iyagoo baaraya waxa shaqeeyay iyo wixii aan qabsoomin, ayagoo u oggolaanaya casharradan inay u adeegaan dhagxaanta shaqadeenna qaybta bulshada sannadaha soo socda.
Waxa si weyn u kala duwan maanta, si kastaba ha noqotee, waa in 50-kii sano ee la soo dhaafay, aan noqonnay kuwa kala jaad ah, wax badan laga bartay, oo aan aad isugu xirnahay. Waxaan haynaa jiilka ugu badan ee jinsi ahaan iyo dhaqan ahaanba umadaha taariikhdeena, oo ay ka buuxaan mufakiriin heer sare ah iyo wax qabadyo kuwaas oo waxtarkooda kaladuwan ay asal ahaan u wareejiyeen fahamkeenii ku saabsanaa wixii aan ahaan jirnay iyo hada aan nahay. Ficilka diiwaangelinta taariikhda iyo kor u qaadista sheekooyinka aan la sheegi karin ee guusha iyo musiibada ayaa murgiyay sheekada soo jireenka ah ee Mareykanka. Qeylo dhaan balaaran oo loojeedinayo dhamaan fanaaniinta-indheer garadka cadaalada salka ku haya, howl wadeenada, gabayaaga, qorayaasha, qabanqaabiyaasha, odayaasha, iyo dhalinyarada, dhamaan shaqooyinkaaga. Waxaan hadda sifiican u awoodi karnaa inaan aragno sida xaaladaha maanta jira ay yihiin wax soo saar aan aheyn khaladaad shaqsiyeed, laakiin halkii nidaamyada ay kufashilmi lahaayeen, oo noo dejinaya koorso nolol gooni ah oo aan sinnayn oo inta badan ku saleysan isir, dhaqan, iyo jinsi. Hadda oo leh dad xog-ogaal ah, iyo qayb bulsheed oo saldhigeedu sarreeyo, waxaan si ka wanaagsan sidii hore aan ugu diyaar garownay inaan isugu nimaadno deg deg iyo hammi wadaag ah si loo bogsiiyo, loo soo celiyo, loona beddelo cilaaqaadyadeena iyo meeraheenna.
Marka, maxay tani uga dhigan tahay qaybta samafalka? Tani waxay ka dhigan tahay inay tahay inaan sii wadno ku shaqeynta waxqabadka iyo deg-degga aan dareemay sanadkii la soo dhaafay. Qeyb ahaan, waa inaan sii wadnaa inaan u dhaqano si ka duwan, si talaabooyinka la qaaday intii lagu jiray aafada si loo yareeyo saameynta xun ee ugu badan ee laga filayo deeq bixiyeyaashu inaysan istaagin. Waa inaan sii wadnaa dhageysiga oo aan kor ugu qaadnaa awoodaheena gaarka ah iyo mudnaanteena maalgelinta, ka wareejinta daawadayaasha una noqo kaqeybgale. Waa inaan xusuusnaano in culeyska caqabadahayagu u baahan yahay dhammaanteen inaan wada shaqeyno - aqbalno inaanan awood u yeelan doonin inaan ka fikirno wadadeena hore ama aan isbeddel ku sameeyno innaga oo aan dheelitirin madaxa, qalbiga, iyo gacmaha.
Waa inaan diyaar u nahay oo aan ku faraxsanahay inaan helno jawaab celin toos ah sida tan lagu soo bandhigay warbixintii dhowaan CEP, “U Adkaysiga Dhibaatada: Xaaladda aan macaash doonka ahayn. ” Warbixintu waxay muujineysaa in ficilladayada wadajirka ahi ay isbeddel dhab ah sameynayaan. Haddana iyadoo lagu guda jiro natiijooyin wax ku ool ah, waxaan ku guuldarreysannay aagagga muhiimka ah ee iskaashiga lala yeelanayo bulshooyinka Aasiya, Bariga Dhexe, iyo Dhaladka Mareykanka. Iyo, waa inaan sii wadnaa inaan sifiican usameyno si aan uga guuleysano u janjeedhkeena inaan udhaqano si kaduwan - iyo ka jawaab celin yar - ururada ay hogaamiyaan haweenku. Tani waa mid aad u fiican, jawaab celin cad, iyo fursad aan ugu sii quusno ballanqaadyadeena sinnaanta.
In kasta oo qaar badani qoreen qoraallo taxaddar leh oo sheekooyin taxaddar leh, si sax ah ugu tuuraya hooska qoraallada warbaahinta bulshada iyo ogeysiisyada waaweyn iyaga oo adeegsanaya ereyo awood leh oo aan weli waxqabad la taaban karo ka jirin, waxaan rabaa inaan naftayda la tartamo, inagula tartamo, inaan himilooyinkeenna horay u sii qaadno wixii aan ka mid noqon doonno abuuraya.
Tusaale ahaan, yaa horay u sii ogaan karay in Waaxda Tamarta ee Mareykanka ay ku soo muuqan doonto qaabab aysan waligeed hore u arag? Madaxweyne Biden wuxuu magacaabay Ku-xigeenkiisii ugu horreeyay abid ee Cadaaladda Tamarta, Shalonda Baker, oo ah borofisar sharciga iyo qoraaga Awoodda Kacaanka: Tilmaamaha Dhaq-dhaqaaqa ee Tamarta Kala-guurka. Baker ayaa hogaaminaya Cadaaladda40 Initiative taas oo balanqaadeysa 40% faa'iidooyinka maalgashiyada cimilada ayaa loo qeybin doonaa bulshooyinka midabka leh iyo bulshooyinka dakhligoodu hooseeyo.
Sida ay asxaabta maalgashiga u arkeen, isbeddelada qaran ee miyir-qabka ayaa sidoo kale galaya dhaqdhaqaaqa caasimada hay'adaha. Bishii Maajo ee la soo dhaafay, inta badan saamileyda ExxonMobil waxay u doorteen laba agaasime guddiga sababta oo ah shirkaddu waxay u baahan tahay hami, istiraatiijiyad macquul ah oo ku saabsan cimilada. Maalgashadahan aan horay loo arag wuxuu ka fallaagoobay shirkad caan ah oo Mareykan ah oo u baahan taageero ka timaadda ilaaliyeyaasha waaweyn ee caasimadda. Maal-gashadeyaasha Mega - sida Blackrock iyo Vanguard oo wada leh 14% ee shirkadda - ugu dambeyntiina waxay u istaageen inay kordhiyaan halista cimilada ee ay muujiyeen maal-galiyeyaasha bulshada ka mas'uulka ah sannado.
Marka, maxay noqon doontaa tallaabooyinkeenna xiga inay noqdaan waax?
1) Waa inaan xirxiraa gacmaheena, u heellanaa heshiisyo shaqsiyeed, mid hay'adeed, iyo heer deegaan ah in aan iskula xisaabtanno midkeenba midka kale iyo daneeyeyaashayada kaladuwan iyo kuwa kaladuwan.
2) Waa inaan ka guurnaa barxadkeenna qaababka aabbanimada ee samafalka oo aan qaadannaa mabaadi'da iyo dhaqannada xiriirka la leh salka ku haysa macnaha guud (oo ay ku jiraan meesha iyo dadka loo adeegayo) iyo kakanaanta. Waxaan aad ugu talin lahaa tan awood leh, gabal qasab ah waxaa iska kaashaday Isbedelka Bulshada. Waxay siisaa dheelitirnaan wax ku ool ah oo aqoon iyo qalab wax ku ool ah oo loogu talagalay maalgeliyeyaasha doonaya inay beddelaan dhaqamada iyo mabaadi'da. Aniga oo si weyn u ogeysiiyey maalgeliyeyaasha caalamiga ah, waxaan kula talin lahaa maalgeliyeyaasha Mareykanka inay helaan ilo wehel oo la xiriira sinnaanta jinsiyadda iyo samafalka caddaaladda gaar ahaan xaaladda Mareykanka.
3) Heerka aasaaska shaqsiyeed, aan si ula kac ah u qaadno waqti aan ku milicsanno. Waa inaan ku kulanno goleyaal kala duwan, shaqsiyaadka si kala duwan ay u saameeyeen xisaabtanka aafada iyo midabka, doorkeenna xirfadeed, iyo xubno ka tirsan ururradeena waaweyn. Xubnaha guddiga, maamulka, shaqaalaha, deeq-bixiyeyaasha, iyo la-hawlgalayaasha, waxay leeyihiin fursad qaas ah oo ay ku bixiyaan aragti guud oo ku saabsan waxa shaqeeyay, waxa gaabiyay, iyo waxa aan wali kala caddeyn maadaama ay la xiriirto isbeddeladayadii ugu dambeeyay ee ku saabsan bixinta kharashka, deeq-bixinta, isgaarsiinta, shirarka, howlaha, hibada, iyo barashada.
Tani waa daqiiqad aan ku qaban karno qaybteena dhiirrigelinta, kheyraadka, iyo dardargelinta shaqada naga caawin doonta inaan dhalanno Mareykanka cusub, runtiina umad dhan u ah. Hantida badan ee qaybta bulshada, kaadir kaladuwan oo awood badan oo xirfadlayaal samafal iyo deeq-bixiyeyaal ah, waa waqtigeena, waqtigeena, waxayna noqon doontaa dhaxalka jiilkeenna.
Aynu ku abuurno hal abuur naqshadeynta barnaamujkeena soo socda ee isbedelka bulshada. Sidii aan maqlay waxaa la yidhi, "aan wax ka dul dhisno ilo, ma aha lebenno" - oo lagu wada xiray qiyamno la wadaago haddana naaqus u leh in la guuro oo sare loo kaco, wadajir.